ရောင်းရန်ဓါတ်ပုံများများအတွက် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT
Hypobaric - မြင့်
တစ်ဦး Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကဘာလဲ?
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် Air ကို Compressor
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ဆီဂျင် Generator ကို
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Hyperbaric နည်းပညာရှင်
TEKNA အလေ့အကျင့် Solutions
Home/ရောင်းမည် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT/ရောင်းရန် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT/ရောင်းရန်ဓါတ်ပုံများများအတွက် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT
ရောင်းရန်ဓါတ်ပုံများများအတွက် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOTteknamfg2018-01-02T13:25:22+00:00
ရောင်းရန်ဓါတ်ပုံများများအတွက် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
အဆိုပါ hybrid ကို 4000 အစဉ်အမြဲငါမြင်ကြပြီ nicest Monoplace ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဖြစ်ပါတယ်။
hybrid ကို 4000
အဆိုပါ Tekna ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေတသမတ်တည်းသူတို့ရဲ့ရေငုပ်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေမှတ်ချက်ပေးရန်။
ဟူဂို - ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအော်ပရေတာ
ခြောက်နိုင်ငံလူတစ်ဦး Multiplace သငျသညျ 2009 အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတညျဆောကျကြောင်းစနစ်အလုပ်ကိုင်ရန်ထိရောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ရွိုင်း Schmidt က - TN Hyperbaric စင်တာများ
ကျွန်တော်တို့၏ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း စိတ်ကူးပါ! ကျနော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့!
အဆိုပါလူနာ Tekna ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအေးမြကြည့်ထင်နှင့်သူတို့ကျယ်ဝန်သောချစ်ကြတယ်။
ကျနော်တို့အရည်အသွေး, လက်ရာ, ငါတို့နှစ်ဦးကိုမော်ဒယ် 6000 Multiplace ကုန်သည်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ပြီ။
စတီဗင် Meress - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း Hyperbarics
2000 အတွက်သုံး Monoplace ကုန်သည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိန့်ကတည်းကကျနော်တို့ Tekna ထံမှ HBOT စနစ်များ၏ $ 1 သန်းဒေါ်လာကျော်ဝယ်ယူကြပါပြီ။
ယောဟနျသ Richmond - Bioaeris
hybrid ကို 3200
အဆိုပါ Tekna 4000 သုံးစွဲဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသည်။ အသုံးပြုရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုယူ။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ!
ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းထဲက 2002 built-in များနှင့်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာလိုမျိုးတော့ပါပဲ။ ကျနော်တို့မဆိုပြဿနာများရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
ဂျေး - ပိုင်ရှင် - စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး
မဟုတ်၎င်းကပုံမှန်ရှုပ်ထွေးအခန်းထဲက။ အဆိုပါ Tekna 7200 အကြောင်းကိုအရာအားလုံးမြင့်မားတဲ့အဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာ Matthews က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာအားလုံးသည် Tekna အခန်းထဲကကိုချစ်။ ဒါသက်သာခြင်းနှင့်ကျယ်ဝန်သောဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းထဲကကိုလညျးမတားဆီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစစ်ဆင်ရေး၏ 15th တစ်နှစ်င်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးနှိမ့်ချသောနေ့ရက်ခဲ့ဖူးပါဘူးအတွက်ပါပဲ။
အဆိုပါ Tekna ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအော်ပရေတာဖော်ရွေသည်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခေါင်းလောင်းနှင့်စီများမှုတ်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသင်ကူညီပါရန်စောင့်ဆိုင်းနေကာတဲ့ Expert ရှိသည်!
ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့အမည်, ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Email လိပ်စာရိုက်ထည့်ဖို့နဲ့ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး reply လိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို: (လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့သည် Check)
Hyperbarics ၏ business
Hyperbaric ဆေးခန်း Layout
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေတပ် Compressor / O2 Generators
"အပျော့စား Hyperbarics" ၏အားနည်းချက်များကို
အာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘရာဇီးဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂို, အဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကွန်ဂို, အသမ္မတနိုင်ငံကော့စတာရီကာCote d'Ivoireခရိုအေးရှားကျူးဘားကူရကာအိုဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့တီမောအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်ဣသရလေအီတလီဂျမေကာဂျပန်ယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီမြောက်ကိုရီးယားေတာင္ကုိးရီးယားကိုဆိုဗိုကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မက်ဆီဒိုးနီးယားဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုMauritaniaမောရစ်ရှမက္ကစီကိုMicronesiaမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်း၏ပြည်နယ်ပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံရိုမေးနီးယားရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းစိန့်မာတင်ဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံစိန့်မာတင်ဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကစပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူဒန်, တောင်ဆူရာနမ်ဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံတိုဂိုTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်Tuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီးဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islands, ဗြိတိန်Virgin Islands, အမေရိကန်ယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
တဲ့ Expert မေးပါ
ဤသည် iframe အေဂျက် powered ဆွဲငင်အား Form များကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သောယုတ္တိဗေဒပါရှိသည်။
မူပိုင် 2012 - 2017 | Tekna Hyperbaric | All rights reserved |
LinkedIn တို့Facebook ကတွစ်တာ
2018 (C) All rights reserved ။
အခုတော့ 105 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဘာသာသို့
သငျသညျ Registerd နေကြတယ်
ကျနော်တို့ 2018 ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်
အနီးကပ် X ကို
နိုငျငံတျောသမ်မ / အမေရိကန်အရောင်း